Madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka iyo Raysulwasaare Rooble oo kulan ku yeelan doona Baydhabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka iyo Raysulwasaare Rooble oo kulan ku yeelan doona Baydhabo
December 19, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntlland Mirror) Madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka iyo Raysulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa in asbuucaan ay kulan ku yeeshaan magaalada Baydhabo kulankaas oo ay diirada ku saari doonaan arrimaha doorashooyinka, sida ilowareedyo madaxtooyada Puntland ku dhow ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer oo hore dib u dhacday ayaa heshiisyo laga gaaray balse weli waxaa jira gaabis iyadoo xukuumada Farmaajo uu wakhtigeedii ku egaa 8-dii Febaraayo 2021.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah kulan la qaatay wefdi ka soda UNSOM iyo IGAD. Kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso, halkaas madaxweynuhu maalmihii u dambeeyay uu [...]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s minister of information, Mohamed Abdi Hayir Mareye has called on the Somali federal government to deploy forces into Galkayo town to intercept the ongoing fight between the Puntland forces and Galmudug militias. [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Boosaaso kadib booqasho afar maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalka Isutaga Imaaraatka Carabta. Madaxweynaha ayaa hadal kooban oo [...]